काठमाडौं, १८ चैत । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्भिक अस्पतालले मूल भवन भन्दा छुट्टै १५ शैय्याको कोभिड आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चालनमा आएको आइसोलेसन वार्ड सम्पूर्ण उपकरण जडित भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
नर्भिक अस्पतालका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर डा. विप्लव सापकोटाले प्रारम्भिक चरणमा धेरै केसहरु नदेखिएको समयमा १५ वटा बेड राखेर आइसोलेसन वार्ड सुरु गरिएको र पछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो भने आवश्यकता अनुसार अस्पताललाई नै आइसोलेसनमा लैजान पनि आफूहरु तयार रहेको बताए ।
अन्य निजी अस्पतालहरुले ज्वरो, रुघाखोकी लागेका विरामीलाई गेटबाटै फर्काउने गरेका समाचारहरु आइरहेका बेला नर्भिक अस्पतालका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर डा. सापकोटाले भने आफूहरुले कसैलाई पनि नफर्काएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको प्रोटोकलअनुसार अस्पतालमा आएका विरामीलाई पहिले फिवर क्लिनिकमा लैजाने गरिएको र सामान्य उपचारले ठीक हुने विरामीलाई उपचार गरेर घर पठाउने गरिएको उनले बताए । शंकास्पद विरामीको स्वाब परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको र जटील प्रकृतिकै विरामी छ भने आइसोलेसन वार्डमा राखेर कोभिड-१९ परीक्षणका लागि स्वाब पठाउने गरिएको उनले बताए ।
हेरौं डा. सापकोटासँग गरिएको कुराकानीः
अहिलेको विश्वव्यापी संकटका समयमा नर्भिक अस्पताल र अध्यक्ष वसन्त चौधरीको पहलले निजी अस्पतालप्रतिको नकारात्मक धारणालाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ । अन्य निजी अस्पतालहरुले अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै खालको पहल लिएको देखिँदैन । अझ कतिपय अस्पतालहरुले त अस्पताल पुगेका विरामीहरुलाई समेत गेटबाटै फर्काउने गरेका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएसँगै नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोरोना राहत कोष निर्माण गरेको थियो । नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष वसन्त चौधरीले उक्त कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सँगसँगै उनले नर्भिक अस्पतालमा छुट्टै आइसोलेसन वार्ड पनि सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अध्यक्ष चौधरीले नर्भिक/बसन्त चौधरी फाउन्डेसनले ५० लाख नगद र ५० लाख बराबरको मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आवश्यक सामग्रीको सूची मागिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । सरकारले पैसा भन्दा सामग्रीको आवश्यकता रहेको बताएकोले आवश्यक सामग्रीको सूची मागेको उनले बताए । ५० लाख रुपैयाँ चाहिँ सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने उनले बताएका छन् ।
बसन्त चौधरी अध्यक्ष रहेको एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्यूसन अफ नेपाल (अफिन)ले आफ्ना सबै सदस्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरुमा २० प्रतिशत छूट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नर्भिक अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको आइसोलेसन वार्डका केही तस्वीरहरुः